छविपछि शिल्पाको नया लफडा सोनुसंग, शिल्पा भन्छिन् 'हराउनलाई खेल' - www.dthreeonline.com
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २७, २०७७ समय: ६:५४:२१
ईटहरी/ नेपाली सिने नगरीमा सेलेब्रेटिहरुको प्रेम, विवाह र डिभोर्सको कुरा निकै चल्ने गरेको छ । सम्बन्ध बिछोडको कुराले त झनै ठूलो चर्चा पाउने गरेको छ । केहिले थोरै चर्चा पाउछ भने यतिबेला छविराज ओझा र शिल्पा पोख्रेल बिचको सम्बन्ध बिग्रेको कुराले भने अझै किनारा पाउन सकेको छैन । डिभोर्सको कुरा भएको र अदालतमा मु द्दा चलेको यत्तिका समय बित्दा पनि यो कुरा अझै सेलाएको छैन । मु द्दा बिचाराधिन नै छ ।
यता शिल्पालाई भने नया ल फ डा लागेको छ । उनी भोजपुरी फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सोनु खत्रीसंग अफयरमा रहेको कुरा सार्बजनिक भएको छ । जसको प्रमाण उनकी श्रीमती कोमल खत्रीले सार्बजनिक गरेको स्ट्याटस र भिडियो हो । जुन हामी संगपनि सुरक्षीत छ । सोनुको निर्माण तथा निर्देशन रहेको भोजपुरी फिल्म ‘जय सम्भु’मा शिल्पा मुख्य भुमिकामा खेलेकि छन् । कोमलले भिडियोमा शिल्पाको नाम नै तोकेर आफुहरुको जिन्दगी ब र्वा द पार्दिएको कुरा रु दै भनेकी छन् ।
यता यस बिषयमा शिल्पासंग हामिले कुरा गर्यौ । उनले यो ‘केश हार्ने पक्का भएपछि कसैको काधमा बन्दुक राखेर गोलि चलाउने काम भएको हो’ भन्ने जवाफ दिइन् । हामिले फरक केस हैन र ? भन्दा सोही केसको यो अर्को पाटो हो भन्ने जावाफ डिथ्री अनलाइनलाई दिइन् । कुनै दिन प्रमाण समेत मिडियामा आउने कुरा हामिलाई सुनाइन् । यसअर्थमा सिधै बुझ्न सकिन्छ कि, कोमल अर्थात सोनुको श्रीमती छबिराजको खटनमा चलेकी छन । अर्थात आफू हार्न लागेकोले छबिले कोमललाई हातमा लिए । शिल्पाको भनाई सिधै यतातिर जान्छ । बाकी तपाईहरु नै जान्नुस् । यता, शिल्पाले छबि बि रु द्ध हालेको मु द्दा को बारे पनि कुरा गरिन् ।
उनले मानाचामल सहित अंस मु द्दा हालेकी छन् । उता मिडियामा भने आफुले सम्पत्तिको लागि विवाह नगरेको बताउदै आएकी छन् । यस बिषयमा पनि हामिले कुरा गर्दा उनले ‘मेरो मात्र हैन हरेक महिलाको अधिकारमा पर्ने कुरा हो’ भनिन् । उनले थप्दै ‘ मैले मेरो नया लाईफ सुरु गर्नु पर्छ त्यसको लागि कानुनले अधिकार दिएको छ’ । उनले हामी समक्ष ‘बाबुको बिपरित गएर विवाह गरियो, अब मलाई मेरो लाईफ चलाउन लाई पैसा दिनुस भनेर आमाबाबुलाई भन्न पनि गार्हो हुन्छ’ भन्दै उदाहरण पेश गरिन् ।
शिल्पाले अधिकारको सम्पती त लिएरै छाड्लीन् । तर लागेको नया ल फ डा लाई कसरी सामना गर्छिन् ? त्यो भने सोचनिय बिषय भएको छ । किनकी, कुरा सामाजिक संजालमा आईसकेको छ । सामाजिक संजाल भनेको नेपालको कानुन भन्दा माथी झै छ भन्दा फरक पर्दैन । शिल्पा त भन्छिन् ‘च रि त्र ह त्या भएको छ, आएको न्युजको खन्डन गर्दै अदालत सम्म पनि पुग्न सक्छु ।’ उनको भनाई छ ‘कसैसंग काम गर्दैमा अफयर हुदैन’ । पक्कै पनि, यो भनाईले कत्तिको सार्थकता पाउला त ? त्यो आगामी दिनले बताउने नै छ ।